Plate Ptfe Sheets - Plate Ptfe Sheets PTFE - Plate Ptfe Sheets Supplier - Plate Ptfe Sheets Teflon - PTFE ပြား Teflon စာရွက်, PTFE လှံတံပေးသွင်း, PTFE ဘုတ်အဖွဲ့ Teflon ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, PTFE ချောင်းတွေ Teflon ဘား, PTFE တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, သတ္တုပါး
နေအိမ် > Teflon စာရွက် > Plate Ptfe Sheets -
Plate Ptfe Sheets,Plate Ptfe Sheetsအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Cox ပလတ်စတစ် အပေါ် Jul 10th, 2015rating: 4.5Quality Plate Ptfe Sheets supply by COX PlasticPlate Ptfe SheetsBest Plate Ptfe Sheets supply by China COX Plastic with best price.
Virgin Ptfe Sheet COX Plastic only offer Virgin PTFE products. ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းပါဝင်တဲ့လျှင်နှစ်ချက်လျော်ကြေး.
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 10 – 20 / ကီလိုဂရမ်
Min.Order အရေအတွက်: 20 ကီလိုဂရမ် / ကီလိုဂရမ်
supply နိုင်ခြင်း:5တစ်လလျှင်တန်ချိန် / တန်ချိန်
Virgin Ptfe Sheet Packing & ပို့ခြင်း
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: as your requirement or our packing standard
Delivery Detail: 2-5 နေ့ရကျ
မူလအစရာ: Guangdong, China (တိုက်) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Cox မော်ဒယ်နံပါတ်: IDL-PTFE-001
ပစ္စည်း: PTFE အထူ: 0.5-100 အရွယ်: 0.5m*1m,1m*1m,1m*2m
အရောင်: အဖြူ, or required
ကညာ PTFE စာရွက်
Item:Ptfe PTFE စာရွက်
ပစ္စည်း:PTFE virgin, PTFE+25%GF, PTFE+30%GF,PTFE+Graphite,PTFE+Carbon
အရောင်: White, or as required
သိပ်သည်းဆ:2.13-2.3 g / cm3 (the actual density is subjected to the final confirm)
Tolerence:+/-0.1-3မီလီမီတာ, according to different sizes
Expanded Ptfe စာရွက် / ပြား